Tag: Burundi | Sagal Radio Services
Dowlada Burundi oo ku hanjabtay in ay ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya
Dawlada dalka Burundi ayaa sheegtay inay Soomaaliya ka saarayso ciidamo 5000 ka badan kadib markii gunooyinkii laga goostay.
Ururada xaquuqul insaanka: Burundi gumaad ayaa ka dhici kara
Burundi oo ka mid ah dalalka Soomaaliya usoo diray ciidamada nabad ilaalinta ama AMISOM ayaa asaga qudhiisa waxaa haatan looga baqayaa in gumaad uu ka dhaco ama xasuuq sida hayadaha xaquuqul insaanka ee caalamiga ah ay ka digayaan.
Burundi oo ku hanjabtay inay ciidanka kala baxayso Soomaaliya Haddii aan Mushaarkooda la siin
Dowladda Burundi ayaa ku goodisay in ciidankeeda Qaybta ka ah Hawl-galka Midowga Afrika ee Somalia [AMISOM] ay kala bixayso haddii aan si toos ah loo siin mushaarkooda.
Dowlada Burundi oo ka hadashay Qasaarihii Ciidankooda kasoo gaaray Weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Leego
Afhayeen Milatari oo u hadlay Dowlada Burundi ayaa qiray in qasaaro lixaad leh uu kasoo gaaray Weerarkii xooganaa ee shalay aroor hore Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ku qaadeen Xero Ciidamada Burundi oo qeyb ka ah AMISOM ku lahaayeen Deegaanka Leego.
Madaxweynaha Burundi oo ku fashilmay inuu dib ugu laabto dalkiisa, kadib afgambiga dhacay
Madaxweynaha Burundi Peirre Nkurunziza ayaa ku fashilmay inuu dib ugu laabto Caasimada Bujumbura, saacado kadib markii Jeneraal ka tirsan Ciidanka Burundi uu ku dhawaaqay Afgambi, xilli Madaxweynaha uu dalka ka maqnaa.